Izinhlanganyelo zami eziningana ezedlule bezimayelana nomsebenzi kaNkulunkulu, isimo sikaNkulunkulu, kanye noNkulunkulu uqobo Lwakhe. Emuva kokuzwa lezi zinhlanganyelo ngabe nizwa sengathi nizuze ukuqonda nolwazi ngesimo sikaNkulunkulu? Ingabe ukuqonda nolwazi okukhulu kangakanani? Ingabe ningaba nesibalo salokho? Ingabe lezi zinhlanganyelo zininikile ukuqonda okujulile ngoNkulunkulu? Kungashiwo ukuthi lokhu kuqonda kuwulwazi oluyiqiniso ngoNkulunkulu? Kungashiwo ukuthi lolu lwazi nokuqonda kuwulwazi ngaso sonke isimo sikaNkulunkulu, nakho konke anakho nayikho? Cha, ngokusobala akunjalo! Yingoba lezi zinhlanganyelo zinike ukuqonda ingxenye nje yesimo sikaNkulunkulu, nalokho anakho nayikho—hhayi konke, noma konke sekuphelele. Izinhlanganyelo zinenze nakwazi okuqonda ingxenye yomsebenzi owake wenziwa nguNkulunkulu, enabona ngawo isimo sikaNkulunkulu, nalokho anakho nayikho, kanye nendlela nokucabanga okungemuva kwakho konke lokho akwenzile. Kodwa lokhu kungukuqonda okungajulile futhi okukhulunywayo nje ngoNkulunkulu, futhi ezinhliziyweni zenu, nisala ningenasiqiniseko ukuthi kungakanani kulokhu kuqonda okuyiqiniso. Yini enqumayo ngempela ukuthi likhona yini iqiniso ekuqondeni kwenu izinto ezinje? Kuncike ekutheni angakanani amazwi nesimo sikaNkulunkulu abawezwile ngempela ngesikhathi sabedlule kukho uqobo nokuthi kungakanani abakwaze ukukubona futhi bakwazi ngesikhathi salokho abedlule kukho uqobo. “Izinhlanganyelo eziningi zokugcina zisivumele ukuba siqonde izinto ezenziwa nguNkulunkulu, imicabango kaNkulunkulu, kanti ngaphezu kwalokho isimo sengqondo kaNkulunkulu ngesintu, nesisekelo sezenzo Zakhe, kanye nezimiso zezenzo Zakhe. Ngakho sesifike ekuqondeni isimo sikaNkulunkulu, sesazi konke okuphelele ngoNkulunkulu.” Kukhona owake washo amazwi anjalo? Ingabe kulungile ukusho lokhu? Akulungile neze. Futhi kungani ngithi akulungile? Isimo sikaNkulunkulu, nalokho anakho nayikho kuvela ezintweni azenzile nasemazwini awakhulumile. Umuntu uyakwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu unani nokuthi ungubani ngomsebenzi uNkulunkulu awenzile nasemazwini awakhulumile, lokhu kungukuthi nje umsebenzi namazwi kwenza umuntu aqonde ingxenye yesimo sikaNkulunkulu, kanye nengxenye yalokho anakho nayikho. Uma umuntu efisa ukuzuza ukuqonda okuningi kakhulu nokujulile ngoNkulunkulu, umuntu kufanele ezwe okuningi ngamazwi nemisebenzi kaNkulunkulu. Nakuba umuntu ezuza ukuqonda okungaphelele nje lapho ezwa ingxenye yamazwi nomsebenzi kaNkulunkulu, lokhu kuqonda okungaphelele kuyasimela yini isimo sikaNkulunkulu seqiniso? Ingabe kuyayimela ingqikithi kaNkulunkulu? Impela kuyasimela isimo sikaNkulunkulu seqiniso, nengqikithi kaNkulunkulu, ngalokho akukho ukungabaza. Akukhathaleki okwesikhathi, noma indawo, noma indlela aziveza ngayo kumuntu, noma indlela ayiveza ngayo intando Yakhe, konke akwembulayo nakuvezayo kumele uNkulunkulu uqobo Lwakhe, ingqikithi kaNkulunkulu nakho konke anakho nayikho. UNkulunkulu wenza umsebenzi wakhe ngalokho anakho nayikho futhi ngobunjalo beqiniso; lokhu kuyiqiniso ngokuphelele. Kepha, namhlanje, abantu banokuqonda okungaphelele ngoNkulunkulu ngamazwi Akhe, nangalokho abakuzwayo uma belalele intshumayelo, ngakho-ke, ngandlela thize, kungathiwa lokhu kuqonda kuphela kuwulwazi olucatshangaywo. Ngenxa yezimo zenu zoqobo, ningaqinisekisa kuphela ukuqonda noma ulwazi lukaNkulunkulu eniluzwile, nalubona, noma nalwazi futhi naluqonda ezinhliziyweni zenu namhlanje uma omunye nomunye wenu ekuzwa lokhu kulokho enidlule kukho nina uqobo, futhi nize nifike ekukwazini kancane kancane. Ukuba angizange ngiwaxoxe nani la mazwi, benizokwazi ukuthola ulwazi oluyiqiniso ngoNkulunkulu nina ngokwenu? Ukwenze njalo, impela, kungaba nzima kakhulu. Lokho kungenxa yokuthi abantu kufanele babe namazwi kaNkulunkulu kuqala ukuze bazi ukuthi ezwakala kanjani. Kepha noma angaba maningi kangakanani amazwi kaNkulunkulu abantu abawadlayo, singako isibalo samazwi abangawezwa ngokoqobo. Amazwi kaNkulunkulu ayahola endleleni engaphambili, futhi aqondisa umuntu endleleni yakhe. Ngamafushane, labo abanolwazi oluthile lwangempela, lezi zihlanganyelo eziningana zokugcina, zizobasiza ukuba babe nokuqonda okujule kakhulu ngeqiniso, kanye nolwazi lwangempela ngoNkulunkulu. Kodwa kulabo abangenakho abadlule kukho kwangempela, noma abasanda kuqala nje ukuzwa kwabo, noma abasanda kuqala nje ukuthinta lokho okungokoqobo, lokhu kuyisivivinyo esikhulu kakhulu.
Ingqikithi yezihlanganyelo eziningana zokugcina beyiphathelene “nesimo sikaNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu, kanye noNkulunkulu uqobo Lwakhe.” Niboneni ezingxenyeni ezisemqoka futhi ezingumongo kukho konke engikhulume ngakho? Ngalezi zihlanganyelo, niyakwazi ukubona ukuthi Lowo owenza umsebenzi, waphinde wazembula lezi zimo, nguNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe, ophethe ubukhosi phezu kwazo zonke izinto? Uma impendulo yenu ithi yebo, yini pho eniholela kulesi simiselo? Yiziphi izingxenye eziniholela kulesi simiselo? Kukhona ongangitshela? Ngiyazi ukuthi izihlanganyelo zokugcina zinithinte ngokujulile, futhi zaletha isiqalo esisha ezinhliziyweni zenu ngolwazi lwenu ngoNkulunkulu, okuyinto enhle kakhulu. Nakuba, nithathe igxathu elikhulu kakhulu ekuqondeni kwenu uNkulunkulu uma kuqhathaniswa nangaphambili, incazelo yenu ngobunjalo bukaNkulunkulu ayikathuthuki ukudlula emagameni kaNkulunkulu uJehova weNkathi yoMthetho, iNkosi uJesu weNkathi yoMusa, kanye noNkulunkulu uSomandla weNkathi Yombuso. Okungukuthi, nakuba lezi zinhlanganyelo mayelana “nesimo sikaNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu, kanye noNkulunkulu uqobo Lwakhe” zininike ukuqonda okuthile ngamazwi ake akhulunywa nguNkulunkulu, nomsebenzi owake wenziwa nguNkulunkulu, kanye nobunjalo nezinto Zakhe ezake zambulwa nguNkulunkulu, anikwazi ukunika incazelo yangempela nokuqondisa okunembayo igama “Nkulunkulu.” Futhi aninakho ukuqondisa okuliqiniso futhi okunembayo kanye nolwazi ngesikhundla nobunjalo bukaNkulunkulu uqobo Lwakhe, okungukuthi, isikhundla sikaNkulunkulu phakathi kwezinto zonke nasemhlabeni jikelele. Yingoba ezinhlanganyelweni ezingaphambili eziphathelene noNkulunkulu uqobo Lwakhe nesimo sikaNkulunkulu, konke okuqukethwe kwakunesisekelo ezinkulumweni nezambulo ezibhalwe eBhayibhelini. Kepha kunzima kumuntu ukuthola ubunjalo nezinto Zakhe ezembulwayo nezivezwa nguNkulunkulu ngesikhathi noma ngaphandle, kokuphatha nokusindisa Kwakhe isintu. Ngakho, noma niqonda ubunjalo bukaNkulunkulu nezinto Zakhe ezembulwa emsebenzini ake awenza, incazelo yenu yobunjalo nesikhundla sikaNkulunkulu isekude le kwekaNkulunkulu oyingqayizivele, Lowo onobukhosi phezu kwakho konke futhi ihlukile kuleyo yoMdali. Izinhlanganyelo eziningi zokugcina zenze ukuba wonke umuntu azizwe ngendlela efanayo: Ingabe umuntu wayengayazi kanjani imicabango kaNkulunkulu? Uma umuntu wayengayazi ngempela, ngokuqinisekileyo lowo muntu kwakungaba uNkulunkulu, ngoba nguNkulunkulu kuphela owazi imicabango Yakhe, futhi uNkulunkulu uqobo Lwakhe owazi isisekelo nendlela enza ngayo konke akwenzayo. Kubonakala kunengqondo futhi kulandeleka ukubona ubunjalo bukaNkulunkulu ngale ndlela, kodwa ubani ongasho ngesimo nomsebenzi kaNkulunkulu ukuthi lokhu ngumsebenzi kaNkulunkulu uqobo, hhayi umsebenzi womuntu, umsebenzi umuntu angeke awenzele uNkulunkulu? Ngubani obonayo ukuthi lo msebenzi ungena ngaphansi kobukhosi balowo onengqikithi namandla kaNkulunkulu? Okungukuthi, yiziphi izici noma ingqikithi obona ngayo ukuthi unguNkulunkulu uqobo Lwakhe, onobunjalo bukaNkulunkulu nophethe ubukhosi kukho konke? Nake nacabanga ngalokho? Uma ningakaze, lokhu kufakazela leli phuzu: izinhlanganyelo eziningi zokugcina zininike nje kuphela ukuqonda okuthile ngengxenye yomlando lapho uNkulunkulu enza khona umsebenzi Wakhe, nendlela yakhe yokwenza, ukubonakaliswa, kanye nezambulo ngesikhathi salowo msebenzi. Nakuba lokhu kuqonda kwenza ngamunye ngamunye wenu abone ngaphandle kokungabaza ukuthi Lowo owenza lezi zigaba ezimbili zomsebenzi nguNkulunkulu uqobo Lwakhe, Lo enikholwa kuye nenimlandelayo, nalowo okufanele nimlandele njalo, kodwa anikakwazi ukubona ukuthi unguNkulunkulu obelokhu ekhona kusukela ekudalweni komhlaba, futhi uzoba khona naphakade, futhi aniboni ukuthi Nguye oholayo futhi ophethe ubukhosi phezu kwesintu sonke. Ngokuqinisekile anikaze nicabange ngale nkinga. Noma nguJehova noma iNkosi uJesu, iziphi izingxenye zengqikithi nokubonakaliswa enikwazi ukubona ngazo ukuthi akukhona kuphela nje ukuthi unguNkulunkulu okufanele nimlandele, kodwa nokuthi uyilowo olawula isintu futhi ophethe ubukhosi phezu kwesimiselo sesintu, ngaphezulu kwalokho, onguNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe ophethe ubukhosi phezu kwezinto zonke? Nibona ngamiphi imigudu ukuthi lona enimkhonzayo futhi enimlandelayo nguNkulunkulu uqobo Lwakhe ophethe ubukhosi phezu kwezinto zonke? Nixhuma ngamiphi imigudu uNkulunkulu okholwa Kuye kuNkulunkulu ophethe ubukhosi okudalelwe isintu? Yini enivumela ukuba nibone ukuthi uNkulunkulu enikholwa kuye unguNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe, osezulwini nasemhlabeni, naphakathi kwezinto zonke? Lena yinkinga engizoyixazulula esigabeni esilandelayo.
1) (UGenesise 1:3-5) Futhi uNkulunkulu wathi, Makube khona ukukhanya: kwase kuba khona ukukhanya. Futhi uNkulunkulu wakubona ukukhanya ukuthi kuhle: Wase uNkulunkulu ehlukanisa ukukhanya nobumnyama. UNkulunkulu wabe esebiza ukukhanya ngokuthi Imini, kanti ubumnyama wakubiza ngokuthi Ubusuku. Kwase kuba ukuhlwa nokusa usuku lokuqala.
2) (UGenesise 1:6-7) Futhi uNkulunkulu wathi, Makube khona umkhathi phakathi kwamanzi, futhi awuhlukanise amanzi kwamanye amanzi. Futhi uNkulunkulu wabe esenza umkhathi, futhi wahlukanisa amanzi ayengaphansi komkhathi emanzini ayengaphezu komkhathi: futhi kwaba njalo.
3) (UGenesise 1:9-11) Futhi uNkulunkulu wathi: Amanzi angaphansi kwezulu mawaqoqeke ndawonye, bese kubonakala umhlabathi owomileyo: futhi kwaba njalo. UNkulunkulu wase ebiza umhlabathi owomileyo ngokuthi uMhlaba, nokuqoqeleka kwamanzi ndawonye wawabiza ngokuthi uLwandle: futhi uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. UNkulunkulu wabe esethi, Umhlaba mawuveze utshani, imifino ethela imbewu, kanye nemithi yezithelo ethela izithelo zohlobo lwayo, embewu yayo ikuyo, emhlabeni: futhi kwaba njalo.
4) (UGenesise 1:14-15) Futhi uNkulunkulu wathi, Makube khona emkhathini wezulu izinkanyiso ukwahlukanisa imini kubusuku; futhi azibe yizibonakaliso, zezinkathi zonyaka, zezinsuku, nezeminyaka: Zibe futhi yizinkanyiso emkhathini wezulu zokukhanyisa emhlabeni: futhi kwase kuba njalo.
5) (UGenesise 1:20-21) Futhi uNkulunkulu wathi, Amanzi mawagcwale uswebezane lwezilwane eziphilayo, kanye nezinyoni ezizondiza phezu komhlaba emkhathini wezulu. UNkulunkulu wase edala imikhomo emikhulu, nazo zonke izilwane eziphilayo ezihambayo, ezavezwa amanzi ngokugcwala kwazo, ngokwezinhlobo zazo, nezinyoni zonke ezinamaphiko ngohlobo lwazo: futhi uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.
6) (UGenesise 1:24-25) Futhi uNkulunkulu wathi, Umhlaba mawuveze izilwane eziphilayo ngokwezinhlobo zazo, izinkomo, nokunwabuzelayo, nezilo zomhlaba ngokwezinhlobo zazo: futhi kwaba njalo.Futhi uNkulunkulu wenza izilo zomhlaba ngokwezinhlobo zazo. nezinkomo ngokwezinhlobo zazo, nakho konke okunwabuzelayo emhlabeni ngokwezinhlobo zazo: futhi uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.
Ake sibheke lesi siqephu sokuqala: “Futhi uNkulunkulu wathi, Makube khona ukukhanya: kwase kuba khona ukukhanya. Futhi uNkulunkulu wakubona ukukhanya ukuthi kuhle: Wase uNkulunkulu ehlukanisa ukukhanya nobumnyama. UNkulunkulu wabe esebiza ukukhanya ngokuthi Imini, kanti ubumnyama wakubiza ngokuthi Ubusuku. Kwase kuba ukuhlwa nokusa usuku lokuqala” (Gen 1:3-5). Lesi siqephu sichaza isenzo sokuqala sikaNkulunkulu ekuqaleni kwendalo, nosuku lokuqala uNkulunkulu adlula kulo, okwakukhona kulo ukuhlwa nokusa. Kodwa kwakuwusuku olumangalisayo: uNkulunkulu waqala ukulungisela ukukhanya kwezinto zonke, futhi, phezu kwalokho, wahlukanisa ukukhanya ebumnyameni. Kulolu suku, uNkulunkulu waqala wakhuluma, futhi amazwi Akhe negunya kwakukhona kuncikene. Igunya Lakhe laqala lavela ezintweni zonke, kanti namandla Akhe asabalala phakathi kwezinto zonke ngenxa yamazwi Akhe. Kusukela ngalolo suku kuqhubeka, zonke izinto zadalwa futhi zama zaqina ngenxa yamazwi kaNkulunkulu, igunya likaNkulunkulu, kanye namandla kaNkulunkulu, futhi zaqala zasebenza ngenxa yamazwi kaNkulunkulu, igunya likaNkulunkulu, namandla kaNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu esho lamazwi “Makube khona ukukhanya,” kwaba khona ukukhanya. UNkulunkulu akenzanga lutho; ukukhanya kwakuvele ngenxa yamazwi Akhe. Yilokhu kukhanya uNkulunkulu akubiza ngosuku, futhi umuntu asathembele kukho nanamhlanje ukuze aphile. Ngenxa yomyalo kaNkulunkulu, ingqikithi nokubaluleka kwakho akukaze kuguquke, futhi akukaze kunyamalale. Ukuba khona kwakho kukhombisa igunya namandla kaNkulunkulu, futhi kwazisa ingqikithi yoMdali, futhi kuqinisekisa ngokuphindelela ubunjalo nesikhundla soMdali. Akuyona into engathinteki, noma ekhohlisayo, kodwa kungukukhanya okubonwa ngumuntu. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, kulo mhlaba ongenalutho lapho “umhlaba wawungenasimo, futhi ungenalutho; futhi kunobumnyama ebusweni bamanzi,” kwakhiqizwa into yokuqala ephathekayo. Le nto yavela emazwini omlomo kaNkulunkulu, futhi yavela esenzweni sokuqala sokudalwa kwezinto zonke ngenxa yegunya namazwi kaNkulunkulu. Ngokushesha emuva kwalokho uNkulunkulu wayala ukukhanya nobumnyama ukuthi kuhlukane… Yonke into yaguquka futhi yaphelela ngenxa yamazwi kaNkulunkulu… UNkulunkulu wakubiza lokhu kukhanya ngokuthi “Imini,” nobumnyama wabubiza ngokuthi “Ubusuku.” Kusukela ngaleso sikhathi, ubusuku bokuqala nemini yokuqala yakhiwa emhlabeni uNkulunkulu ayeqonde ukuwudala, futhi uNkulunkulu wathi lolu usuku lokuqala. Lolu suku kwabe kungusuku lokuqala lokudalwa kwezinto zonke nguMdali, futhi kwakungukuqala kokudalwa kwezinto zonke, futhi kwaba okungokokuqala lapho igunya namandla oMdali ayebonakalisiwe kulo mhlaba ayewudalile.
Ngala mazwi, umuntu uyakwazi ukubona igunya likaNkulunkulu, kanye negunya lamazwi kaNkulunkulu kanye namandla kaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi nguNkulunkulu yedwa onamandla angaka, ngakho nguNkulunkulu yedwa onegunya elikhulu, futhi ngenxa yokuthi uNkulunkulu unegunya elingaka, ngakho nguNkulunkulu yedwa onamandla angaka. Kungaba khona umuntu noma into enegunya namandla angaka? Ikhona impendulo ezinhliziyweni zenu? Ngaphandle kukaNkulunkulu sikhona isidalwa esidaliwe noma esingadalwanga esinegunya elingaka? Nike nasibona isibonelo sento enje kunoma iziphi ezinye izincwadi noma okushicilelwe? Ukhona noma yimuphi umlando othi umuntu othile wadala amazulu nomhlaba kanye nezinto zonke? Akuveli kunoma iziphi ezinye izincwadi noma emlandweni; lawa, ngempela, iwona wodwa amazwi agunyaziwe futhi anamandla ngendalo emangalisayo kaNkulunkulu, abhalwe eBhayibhelini, futhi la mazwi akhuluma ngegunya eliyingqayizele likaNkulunkulu, nobunjalo obuyingqayizivele bukaNkulunkulu. Kungashiwo ukuthi igunya namandla angaka awuphawu lobunjalo obungqayizivele bukaNkulunkulu? Kungashiwo ukuthi ngakaNkulunkulu, futhi uNkulunkulu yedwa? Ngaphandle kokungabaza, uNkulunkulu kuphela onegunya namandla angaka! Leli gunya namandla angeke kube ngawanoma ikuphi okudaliwe noma okungadalwanga noma athathelwe indawo inoma ikuphi okudaliwe noma okungadalwanga! Ngabe ngesinye sezici zikaNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe? Ingabe senikubonile? La mazwi avumela abantu ukuthi ngokushesha nangokucacile baqonde iqiniso lokuthi uNkulunkulu unegunya eliyingqayizivele namandla ayingqayizivele futhi unobunjalo nesikhundla esiphakeme. Kule hlanganyelo engaphezulu, ningasho ukuthi uNkulunkulu enikholwa kuye unguNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe?
Ake sifunde isiqephu sesibili saseBhayibhelini: “Futhi uNkulunkulu wathi, Makube khona umkhathi phakathi kwamanzi, futhi awuhlukanise amanzi kwamanye amanzi. Futhi uNkulunkulu wabe esenza umkhathi, futhi wahlukanisa amanzi ayengaphansi komkhathi emanzini ayengaphezu komkhathi: futhi kwaba njalo..” (Gen 1:6-7) Iziphi izinguquko ezenzeka emuva kokuthi uNkulunkulu ethe “Makube khona umkhathi phakathi kwamanzi, futhi awuhlukanise amanzi kwamanye amanzi.”? EmiBhalweni kuthi: “Futhi uNkulunkulu wabe esenza umkhathi, futhi wahlukanisa amanzi ayengaphansi komkhathi emanzini ayengaphezu komkhathi.” Kwaba yini umphumela emuva kokuthi uNkulunkulu esekhulumile futhi wenza lokhu? Impendulo ilele engxenyeni yokugcina yesiqephu: “futhi kwaba njalo.”
Kulo mfanekiso, amanzi nomkhathi kuvela phambi kwamehlo kaNkulunkulu ngokuphazima kweso, aphinde ahlukaniswa yigunya lamazwi kaNkulunkulu, futhi ahlukaniswa kokungaphezulu nokungaphansi ngendlela ehlelwe nguNkulunkulu. Okungukuthi, umkhathi odalwe nguNkulunkulu awuzange wemboze amanzi angaphansi kuphela, kodwa futhi wasekela amanzi angaphezulu…. Kulokhu, umuntu akakwazi kwenza lutho ngaphandle kokuthi agqolozele, adideke, futhi ababaze ngokuncoma ngenxa yobuhle obukhulu benkundla lapho uMdali adlulisa khona amanzi, waphinde wawayala amanzi, futhi wadala umkhathi, futhi ngamandla egunya Lakhe. Ngamazwi kaNkulunkulu, ngamandla kaNkulunkulu, kanye negunya likaNkulunkulu, uNkulunkulu waphumelela ukwenza esinye isenzo esibalulekile. Akuwona lawa amandla egunya loMdali? Masisebenzise imibhalo ukuchaza izenzo zikaNkulunkulu: uNkulunkulu wakhuluma amazwi Akhe, futhi ngenxa yala mazwi kwaba khona umkhathi phakathi kwamanzi. Khona manjalo, uguquko olukhulu kakhulu lwenzeka kule ndawo ngenxa yala mazwi kaNkulunkulu, futhi kwakungelona uguquko olujwayelekile, kodwa kwabakhona ukuthathelana isikhundla lapho into engelutho yaphenduka utho. Lwazalwa yimicabango yoMdali, kwabakhona utho kukade kungekho lutho ngenxa yamazwi akhulunywa nguMdali, futhi, ngaphezu kwalokho kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeka, kwakuzoba khona futhi kume, ngenxa yoMdali, futhi kwakuzonyakaza, kuguquke, kwenziwe kabusha ngokuhambisana nemicabango yoMdali. Lesi siqephu sichaza isenzo sesibili soMdali ekudaleni Kwakhe umhlaba wonke. Kwabe kungokunye ukuvezwa kwegunya namandla oMdali, futhi kungesinye isenzo soMdali esicaba indlela. Lolu suku kwakungusuku lwesibili uMdali aba nalo kusukela ekudalweni komhlaba, futhi kwakube usuku olumangalisayo Kuye: Wahamba phakathi kokukhanya, waletha umkhathi, wahlela futhi walawula amanzi, kanti izenzo Zakhe, igunya Lakhe, kanye namandla Akhe kwasetshenziswa kulolu suku olusha ….
Wawukhona umkhathi phakathi kwamanzi ngaphambi kokuthi uNkulunkulu akhulume amazwi Akhe? Impela akunjalo! Kanti emuva kokuthi uNkulunkulu ethe “Makube khona umkhathi phakathi kwamanzi?” Izinto ezazihloswe uNkulunkulu zavela; kwabakhona umkhathi phakathi kwamanzi, namanzi ahlukana ngenxa yokuthi uNkulunkulu ethe “futhi awahlukanise amanzi kwamanye amanzi.” Ngale ndlela kulandela amazwi kaNkulunkulu izinto ezimbili ezintsha, izinto ezimbili ezisanda kuzalwa zavela phakathi kwezinto zonke ngenxa yegunya namandla kaNkulunkulu. Futhi nizizwa kanjani ngokuvela kwalezi zinto ezimbili ezintsha? Niyabuzwa ubukhulu bamandla oMdali? Niyawuzwa umfutho oyingqayizivele futhi ongavamile woMdali? Ubukhulu bomfutho namandla angaka kungenxa yegunya likaNkulunkulu kanti leli gunya limele uNkulunkulu uqobo Lwakhe, futhi liyisici esiyingqayizivele sikaNkulunkulu uqobo Lwakhe.
Futhi uNkulunkulu wenza izilo zomhlaba ngokwezinhlobo zazo. nezinkomo ngokwezinhlobo zazo, nakho konke okunwabuzelayo emhlabeni ngokwezinhlobo zazo: futhi uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.” (Gen 1:24-25). Lokhu, kufaka ziphi izidalwa eziphilayo? ImiBhalo ithi: izinkomo, kanye nezilwanyana ezinwabuzelayo, nezilo zomhlaba ngezinhlobo zazo. Okungukuthi, ngalolu suku kwakungeve kukhona zonke izinhlobo zezidalwa eziphilayo phezu komhlaba, kodwa zonke zazihlelwe ngohlobo, ngokunjalo, futhi, “uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.”
Zonke izinto ezidalwe nguNkulunkulu, kuhlanganiswe lezo ezazikwazi ukunyakaza nalezo ezazingakwazi ukunyakaza, njengezinyoni nezinhlanzi, njengemithi nezimbali, futhi kuhlanganiswe nemfuyo, izinambuzane, kanye nezilwane zasendle ezenziwa ngosuku lwesithupha—zonke zazizinhle kuNkulunkulu, futhi, ngaphezu kwalokho, emehlweni kaNkulunkulu, zonke lezi zinto, ngokuhambisana nohlelo Lwakhe, zazifinyelele esicholweni sokupheleliswa, futhi zazifinyelele emazingeni uNkulunkulu ayefisa ukuwafeza. Isinyathelo ngesinyathelo, uMdali wenza umsebenzi ayehlose ukuwenza ngokuhambisana nohlelo Lwakhe. Ngokulandelana, izinto ayehlose ukuzidala zavela, kanti ukuvela kwazo ngayinye, kwakukhombisa igunya loMdali, nokucaca kwegunya Lakhe, futhi ngenxa yalokucaciseka, zonke izilwane zazingenakwenza lutho ngaphandle kokubonga umusa woMdali, nokuhlinzeka koMdali. Njengoba izenzo ezimangalisayo zikaNkulunkulu zazibonakaliswa, lo mhlaba wakhukhumala, kancane kancane, ngazo zonke izinto uNkulunkulu ayezidalile, futhi waguquka ekubeni isiphithiphithi nobumnyama waba nokucaca nokukhanya, wasuka ekubeni nokuthula okuthe cwaka, waba nokuphila okukhwishizayo nempilo engenamkhawulo. Phakathi kwazo zonke izinto zendalo, kusukela kwezinkulu kuya kwezincane, kusukela kwezincane kuya kwezincinyane, akukho okungadalwanga ngegunya namandla oMdali, futhi kwakunesidingo nokubaluleka okuyingqayizivele futhi okusemvelweni yaso, ukubakhona kwesilwane ngasinye. Ngale komehluko ngokubunjwa nesakhiwo sazo, zazifanele ukuba zazenziwe uMdali ukuze zibekhona ngaphansi kwegunya loMdali. Ngesinye isikhathi abantu babona isinambuzane, esibukeka kabi kakhulu, bese bethi, “Lesi sinambuzane sibi kakhulu, ngendlela yokuthi, ayikho indlela yokuthi into embi kanje yayingadalwa nguNkulunkulu—ayikho indlela yokuthi wayengadala into embi kangaka.” Waze wanobuphukuphuku lowo mbono! Okufanele bakusho ukuthi, “Nakuba lesi sinambuzane sisibi kangaka, senziwa nguNkulunkulu, ngakho kufanele ukuthi sinenhloso yaso ehlukile. Emicabangweni kaNkulunkulu, wayehlose ukunika ukubukela ngakunye, nemsebenzi eyehlukehlukene, ezilwaneni eziphilayo ezinhlobonhlobo azidalile. Ngakho ayikho into uNkulunkulu ayidala, ayenza ngobumba olufanayo. Kusukela ekubukekeni kwangaphandle kuya ekubunjweni ngaphakathi, kusuka emikhubeni yaso yokuphila kuya endaweni lapho sihlala khona—isilwane ngasinye sihlukile. Izinkomo zibukeka njengezinkomo, izimbongolo zibukeka njengezimbongolo, izinyamazane zibukeka njengezinyamazane, nezindlovu zibukeka njengezindlovu. Ningasho ukuthi isiphi esihle kunazo zonke, nesimbi kunazo zonke? Ningasho ukuthi isiphi esiwusizo kakhulu, nokuthi iyiphi ingqikithi yaso engenasidingo kakhulu? Abanye abantu bayayithanda indlela izindlovu ezibukeka ngayo, kodwa akekho osebenzisa izindlovu ukulima amasimu; abanye abantu bayayithanda indlela amabhubesi nezingwe ezibukeka ngayo, ngoba ukubukeka kwazo, kuhlaba umxhwele kunazo zonke izinto, kodwa ningakwazi ukuzigcina njengezilwane ezifuyiwe ezithandwayo? Ngamafushane, mayelana nezinto zonke, umuntu kufanele athobele igunya woMdali, okungukuthi, athobele uhlelo olubekwe nguMdali ezintweni zonke; lesi isimo sengqondo esihlakaniphe kunazo zonke. Isimo sengqondo sokufuna, nokulalela izinhloso zasekuqaleni zoMdali, singukwemukela ngeqiniso nokuqiniseka igunya loMdali. Kuhle kuNkulunkulu, ngakho isiphi isizathu umuntu anaso sokuthi asole?
(Genesise 9:11-13) Futhi ngizomisa isivumelwano sami nawe, ayisekho inyama eyophinda ibhujiswe ngamanzi kazamcolo; akasayikuza uzamcolo ukubhubhisa umhlaba. Futhi uNkulunkulu wathi, Lokhu kuwuphawu lwesivumelwano engisenza phakathi kwami nani nazo zonke izilwane eziphilayo ezinani, izizukulwane ngezizukulwane zaphakade: Ngiyamisa uthingo lwami emafwini, futhi luyakuba uphawu lwesivumelwano phakathi kwami nomhlaba.
1) (Gen 17:4-6) Ngokwami, bheka, isivumelwano sami sikuwe, futhi uyakuba ngubaba wezizwe eziningi.Igama lakho akusayikuthiwa u-Abrama, kepha igama lakho lizoba ngu-Abrahama; ngokuba ngikwenze ubaba wezizwe eziningi. Futhi ngiyokwandisa impela inzalo yakho, ngiyakwenza futhi izizwe ngawe, namakhosi ayovela kuwe.
2) (Gen 18:18-19) Ngenxa yokuthi u-Abrahama uzoba ngempela isizwe esikhulu, esinamandla, futhi zonke izizwe zomhlaba ziyobusiswa ngaye? Ngokuba ngiyamazi, uzoyala abantwana bakhe nendlu yakhe emva kwakhe, futhi bayakugcina indlela yeNKOSI, ukwenza ukulunga nokwahlulela; ukuze iNKOSI yenzele u-Abrahama lokho ekushilo ngaye.
3) (Gen 22:16-18) Ngizifungile mina uqobo, kusho iNKOSI, ngenxa yokuthi ukwenzile lokhu, futhi ungayigodlanga indodana yakho, indodana yakho okuwukuphela kwayo: Ngiyakukubusisa nokukubusisa, futhi ngandise nokwandisa inzalo yakho ibe njengezinkanyezi zezulu, nanjengesihlabathi sasogwini lolwandle; futhi inzalo yakho iyothatha isango lezitha zayo; Futhi ngenzalo yakho zonke izizwe zomhlaba zizobusiswa, ngokuba ulilalele izwi lami.
4) (Job 42:12) Ngakho iNKOSI yabusisa isiphetho sikaJobe kunesiqalo sakhe: ngokuba wayenezimvu eziyizinkulungwane eziyishumi nane, namakamela ayizinkulungwane eziyisithupha, namabhagqa ayizinkulungwane ezinkabi, nezimbongolo zezinsikazi eziyinkulungwane.
Masiqale sibuke ku Gen 17:4-6: “Ngokwami, bheka, isivumelwano sami sikuwe, futhi uyakuba ngubaba wezizwe eziningi. Igama lakho akusayikuthiwa u-Abrama, kepha igama lakho lizoba ngu-Abrahama; ngokuba ngikwenze ubaba wezizwe eziningi. Futhi Ngiyokwandisa impela inzalo yakho, ngiyakwenza futhi izizwe ngawe, namakhosi ayovele kuwe.” La mazwi ayeyisivumelwano uNkulunkulu asenza no-Abrahama, kanye nokubusisa kukaNkulunkulu u-Abrahama: uNkulunkulu wayezokwenza u-Abrahama uyise wezizwe, wayezokwandisa kakhulu inzalo yakhe, enze izizwe kuye, futhi amakhosi ayeyovela kuye. Uyalibona igunya likaNkulunkulu kula mazwi? Futhi ulibona kanjani igunya elingaka? Iyiphi ingxenye yengqikithi yegunya likaNkulunkulu oyibonayo? Uma ufundisisa lawa mazwi, akunzima ukuthola ukuthi igunya nobunjalo bukaNkulunkulu bembulwe basobala ngendlela abekwe ngayo amazwi kaNkulunkulu. Isibonelo, lapho uNkulunkulu ethi “isivumelwano sami sikuwe, futhi uyakuba…, ngikwenzile… Ngiyokwandisa…,” imisho enjengokuthi “uyakuba” kanye “Ngiya-,” nendlela ebekwe ngayo, iphethe ukuqinisekisa ubunjalo negunya likaNkulunkulu, le misho ngenye indlela, iyinkomba yokuthembeka koMdali; ngakwenye indlela, ingamazwi akhethekile asetshenziswa nguNkulunkulu, onobunjalo boMdali—iphinde ibe yingxenye yenqolobane yamagama ajwayelekile. Uma umuntu ethi uthemba ukuthi omunye umuntu uzokwanda ngokweqile, nokuthi izizwe ziyophuma kuyena, nokuthi amakhosi ayovela kuyena, lokho akungabazeki ukuthi kuwuhlobo lwesifiso, futhi akusona isithembiso noma isibusiso. Ngakho futhi, abantu abalinge bathi “ngizokwenza ube ilokhu nalokhu, uzokwenza lokhu nalokhu….,” ngoba bayazi ukuthi abanawo lawo mandla; akuncikile kubona, ngisho noma bangazisho izinto ezinjena, amazwi abo ayobe engasho lutho futhi ewumbhedo, oqhutshwa ukufisa nokulangazelela. Ukhona umuntu ongalinga akhulume ngendlela ephakeme kanje, uma ezwa ukuthi ngeke aphumelele ukufeza izifiso zakhe? Wonke umuntu ulufisela okuhle uzalo lwakhe futhi uthemba ukuthi bayohamba phambili bathakasele impumelelo enkulu. Bekungaba inhlanhla enkulu uma omunye wabo ubengaba inkosi enkulu ebusa amanye amakhosi! Uma omunye wabo engaba umbusi lokho kungaba kuhle futhi —inqobo nje uma engumuntu obalulekile! Zonke lezi yizifiso zabantu, kodwa abantu bangafisela izibusiso nje kuphela, phezu kozalo lwabo, futhi ngeke bazigcwalise noma benze izithembiso zabo ziphumelele. Ezinhliziyweni zabo, wonke umuntu niyazi ukuthi abanawo amandla okufeza izinto ezinjalo, ngoba kubo, zonke lezi zinto zingaphezu kwamandla abo, ngakho-ke bangalawula kanjani isimiselo sabanye abantu? Isizathu esingenza uNkulunkulu asho amazwi anjalo ingoba, uNkulunkulu unegunya elikhulu, futhi uyakwazi ukufeza nokugcina zonke izithembiso azenza kumuntu nokwenza zonke izibusiso azinika umuntu ukuthi zigcwaliseke. Umuntu wadalwa nguNkulunkulu, ngakho ukuthi uNkulunkulu enze umuntu ande achichime, kungalula kakhulu; ukwenza uzalo lomuntu ukuba luchume, kungadinga izwi nje Lakhe. Akasoze adinga ukuthi ajuluke ukwenza lokho, noma ahluphe umqondo Wakhe, noma axakeke ngalokho; lokhu ngamandla kaNkulunkulu uqobo, igunya likaNkulunkulu uqobo.
Emuva kokufunda “U-Abrahama uzoba ngempela isizwe esikhulu, esinamandla, futhi zonke izizwe zomhlaba ziyobusiswa ngaye” kuGenesise 18:18, ingabe niyalizwa igunya likaNkulunkulu? Niyakuzwa ukungajwayeleki koMdali? Niyakwazi ukuzwa ubukhulu boMdali? Amazwi kaNkulunkulu aqinisile. UNkulunkulu akawasho lawa mazwi ukukhombisa ukuzethemba ukuthi uzophumelela, kodwa awubufakazi begunya elisemazwini kaNkulunkulu nomyalelo ogcwalisa amazwi kaNkulunkulu. Mabili amazwi okufanele niwaqaphele lapha. Uma uNkulunkulu ethi, “U-Abrahama uzoba ngempela isizwe esikhulu, esinamandla, futhi zonke izizwe zomhlaba ziyobusiswa ngaye,” kukhona ukudida okuthile kula mazwi? Kukhona ukukhathazeka okuthile? Kukhona ukwesaba okuthile? Ngenxa yamazwi athi, “uzoba ngempela” no “ziy0-” emazwini kaNkulunkulu, lezi zinto ezithile, eziphathelene ikakhulukazi nomuntu, futhi ezivame ukubonakala kuye, azikaze zihlanganise lutho noMdali. Akekho umuntu ongalokotha asebenzise amazwi anjalo, ukufisela abantu kahle, akekho umuntu ongalokotha ukubusisa omunye ngesizwe esikhulu nesinamandla, ngokuqiniseka okungaka, noma athembise ukuthi zonke izizwe ziyobusiseka kuye. Uma amazwi kaNkulunkulu eba nesiqiniseko esikhulu, ilapho futhi efakaza okuthile—yini lokho okuthile? Afakazela ukuthi uNkulunkulu unegunya elikhulu, futhi igunya Lakhe lingazifeza lezi zinto, nokufezeka kwazo akunakuvinjwa. UNkulunkulu wayenesiqiniseko enhliziyweni Yakhe, engenakho nokuncane ukungabaza ngakho konke ayebusise u-Abrahama ngakho. Ngaphezu kwalokho, konke lokhu sekuphelele kwakuyofezeka ngangokusho kwamazwi Akhe, futhi awekho amandla ayengakwazi ukuguqula, ukuvimba, ukukhinyabeza, noma ukuthikameza ukugcwaliseka kwakho. Akukhathaleki ukuthi kwakuzokwenzekani, ayikho into eyayingasula noma ibe nomthelela ekugcwalisekeni nokufezeka kwamazwi kaNkulunkulu. Lokhu kungamandla uqobo amazwi aphume emlonyeni woMdali, kanye negunya loMdali ongavumi ukuphika komuntu! Njengoba sewuwafundile la mazwi, usenokungabaza? La mazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu futhi kunamandla, nobukhosi, kanye negunya emazwini kaNkulunkulu. Amandla negunya elingaka, kanye nokungabi nokugwemeka kokugcwaliseka kwalokho okushiwo, lokhu ngeke kwenziwa inoma isiphi isidalwa esidaliwe noma esingadalwanga futhi angeke kwedlulwa inoma yikuphi okudaliwe noma okungadalwanga. UMdali kuphela ongaxoxa nesintu ngaleli phimbo nangale ndlela, futhi amaqiniso akufakazele ukuthi izithembiso Zakhe aziwona amazwi angenalutho, noma ukuqhosha okuyize, kodwa awukubonakaliswa kwegunya eliyingqayizivele elingenakwedlulwa inoma imuphi umuntu, into noma okuthile.
Abanye abantu bathanda ukuqonda nokubuka izinto ngamehlo engqondo, kodwa ingabe amehlo engqondo omuntu angamfikisa kuphi? Ingabe kungafika ngale kwalo mhlaba? Ingabe umuntu uyakwazi ukuqonda nokucabanga ajule ngokuba khona kwangempela nesiqiniseko ngegunya likaNkulunkulu? Ukuqonda nokucabanga okujulile komuntu ingabe kuyakwazi ukumvumela ukuthi athole ulwazi ngegunya likaNkulunkulu? Kungamenza umuntu ukuthi azise futhi athobele igunya kaNkulunkulu? Amaqiniso ayafakaza ukuthi ukuqonda nokucabanga ujule kuvela engqondweni yomuntu, futhi akusizi nakancane futhi akunalo usizo olwazini lomuntu ngegunya likaNkulunkulu. Emuva kokufunda izincwadi zesayensi eziqanjiwe, abanye bangakwazi ukubona ngamehlo engqondo inyanga, nokuthi izinkanyezi kufanele ukuba zinjani. Kepha lokhu akusho ukuthi umuntu unakho yini ukuqonda igunya likaNkulunkulu. Ukubona ngamehlo engqondo kuyilokho nje: ukubuka ngamehlo engqondo. Amaqiniso ngezinto, okungukuthi, ukuxhumana kwazo negunya likaNkulunkulu, akakwazi nakancane. Pho kusho ukuthini ukuthi uke wandizela enyangeni ? Lokhu kuchaza ukuthi unokuqonda okunezingxenye eziningi ngegunya likaNkulunkulu? Kuyakhombisa ukuthi uyakwazi ukucabanga ububanzi begunya namandla kaNkulunkulu? Njengoba ukuqonda nokubuka ngamehlo engqondo komuntu kungakwazi ukumvumela ukuthi azi igunya likaNkulunkulu, kufanele umuntu enze njani? Indlela ehlakaniphe kakhulu ukuthi ungaqondi futhi ungabuki ngamehlo engqondo, okungukuthi umuntu akufanele ancike ekubukeni ngamehlo engqondo futhi athembele ekuqondeni, uma sekuza ekwazini igunya likaNkulunkulu. Yini engifisa ukukuyisho kinina lapha? Ulwazi ngegunya likaNkulunkulu, amandla kaNkulunkulu, ubunjalo bukaNkulunkulu, kanye nengqikithi kaNkulunkulu angeke kufezeke ngokuthembela ekubukeni ngamehlo engqondo. Njengoba ungeke uthembele ekubukeni ngamehl0 engqondo ukuze wazi igunya likaNkulunkulu, iyiphi indlela ongathola ngayo ulwazi lweqiniso ngegunya likaNkulunkulu? Ngokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, ngobudlelwano nokuhlanganyela ndawonye, nangokuzwa amazwi kaNkulunkulu, uzoya ngokuya uba nokulizwa kanye nesiqiniseko ngegunya likaNkulunkulu, ngaleyo ndlela uyozuza ukuqonda okuza kancane kancane kanye nolwazi olwandayo njalo ngalo. Lena yiyo yodwa indlela yokuthola ulwazi ngegunya likaNkulunkulu; azikho izindlela ezinqamulelayo. Ukukucela ukuthi ungabuki ngamehlo engqondo akufani nokuthi ngithi hlala nje, uyethile ulinde ukubhujiswa, noma ukukuvimba ukuthi wenze noma yini. Ukungasebenzisi ingqondo yakho ukucabanga nokubuka ngamehlo engqondo, kusho ukuthi ungasebenzisi ukucabanga ukuqonda, ukungasebenzisi ulwazi ukucwaninga, ukungasebenzisi isayensi njengesisekelo, kodwa kunalokho, ukunanela, ukuthola iqiniso, nokufakazela ukuthi uphethe ubukhosi phezulu kwesimiselo senu, nokuthi amandla Akhe ngaso sonke isikhathi ayamfakazela ukuthi unguNkulunkulu weqiniso uqobo Lwakhe, ngamazwi kaNkulunkulu, ngeqiniso, ngakho konke ohlangabezana nakho empilweni. Yiyo kuphela indlela umuntu angathola ngayo ukuqonda uNkulunkulu. Abanye bathi bafisa ukuthola indlela elula yokufeza le nhloso, kodwa niyakwazi ukuyicabanga indlela enjalo? Ngiyakutshela, asikho isidingo sokucabanga: Azikho ezinye izindlela! Indlela ukuthi uqikelele futhi ubekezelele ukwazi nokuthola iqiniso ngokuthi uNkulunkulu unani futhi ungubani ngamazwi wonke awavezayo nangazo zonke izinto azenzayo. Yiyo kuphela indlela yokwazi uNkulunkulu. Ngoba konke uNkulunkulu anakho nayikho, nazo zonke izinto zikaNkulunkulu, akulona nje igobongo futhi akunalutho—kodwa kuyaphila.
Ngokufanayo, ukubusiswa kukaJobe nguJehova kubhaliwe eNcwadini kaJobe. Ingabe uNkulunkulu wamnikani uJobe? “Ngakho iNKOSI yabusisa isiphetho sikaJobe kunesiqalo sakhe: ngokuba wayenezimvu eziyizinkulungwane eziyishumi nane, namakamela ayizinkulungwane eziyisithupha, namabhagqa ayizinkulungwane ezinkabi, nezimbongolo zezinsikazi eziyinkulungwane” (Jobe 42:12) Ngokubuka komuntu, zabe ziyini lezi zinto ezanikwa uJobe? Kwabe kuyimfuyo nokuyinzuzo kumuntu? Ngalezi zimpahla ingabe uJobe wayezobe ecebile kakhulu, ngaleyo nkathi? Futhi, wazithola kanjani lezi zimpahla? Yini eyadala umcebo wakhe? Nakanjani kwakungenxa yesibusiso, ukuthi uJobe waba nale mpahla. Ukuthi uJobe wayeyibuka kanjani le mpahla, nokuthi wayezibuka kanjani izibusiso zikaNkulunkulu, yinto esingeke singene kuyo. Uma sekuza ezibusisweni zikaNkulunkulu, abantu bonke bayalangazelela, imini nobusuku, ukubusiswa nguNkulunkulu, kepha umuntu akanakho ukulawula ukuthi impahla engakanani azoyizuza ngesikhathi sokuphila kwakhe, noma uzozithola yini izibusiso kuNkulunkulu—futhi leli qiniso lingephikiswe! UNkulunkulu unegunya, futhi unamandla okunika noma iyiphi impahla kumuntu, ukuvumela umuntu ukuthola noma isiphi isibusiso, kodwa kunesimiso ezibusisweni zikaNkulunkulu. Abantu abanjani ababusiswa nguNkulunkulu? Abantu abathandayo, ngokusobala! U-Abrahama noJobe bobabili babusiswa nguNkulunkulu, kodwa izibusiso abazitholayo zazingafani. UNkulunkulu wabusisa u-Abrahama ngenzalo eningi kunezihlabathi nezinkanyezi. Lapho uNkulunkulu ebusisa u-Abrahama, wadala uzalo lwendoda eyodwa, isizwe esisodwa, ukuthi sibe namandla futhi sinothe. Kulokhu, igunya likaNkulunkulu labusa isintu, esabe siphefumula umphefumulo kaNkulunkulu phakathi kwezinto zonke nezidalwa eziphilayo. Ngaphansi kobukhosi begunya likaNkulunkulu, isintu sanda, futhi saba khona ngesivinini, futhi nangohlelo olwalunqunywe nguNkulunkulu. Ikakhulukazi, ukusebenza kwalesi sizwe, izinga lokwanda kwaso, kanye nobude bempilo konke kwakuyingxenye yezinhlelo zikaNkulunkulu, futhi nesimiso sakho konke lokhu kwakunesisekelo sesithembiso uNkulunkulu asenza ku-Abrahama. Okungukuthi, ngale kwezimo, izethembiso zikaNkulunkulu zaziyoqhubeka ngaphandle kwezingqinamba nezihibe, zifezeke ngaphansi kwesiqondiso segunya likaNkulunkulu. Kulesi sithembiso uNkulunkulu asenza ku-Abrahama, ngale kobuyaluyalu emhlabeni, inkathi, nezinhlekelele abantu ababhekana nazo, inzalo ka-Abrahama yayingeke ibhekane nengozi yokuthi ibhubhe, futhi isizwe sabo sasingeke sishabalale. Isibusiso sikaNkulunkulu kuJobe samenza waceba ngokwedlulele. Amnika khona uNkulunkulu, kwabe kuyizinhlobonhlobo zezilwane eziphilayo, eziphefumulayo, imininingwane ngazo—isibalo, ukwanda kwazo zizalana, ukuphila kwazo, isamba samafutha kuzo, njalo njalo—konke kwakulawulwa nguNkulunkulu. Nakuba lezi zilwane eziphilayo zazingakwazi ukukhuluma, nazo zaziyingxenye yezinhlelo zoMdali, futhi isimiso sezinhlelo zikaNkulunkulu kwakuhambisana nesibusiso uNkulunkulu ayesithembise uJobe. Ezibusisweni lezo uNkulunkulu azinika u-Abrahama noJobe, noma lokho okwakukade kuthenjisiwe kwakuhlukene, igunya lomdali ayebusa ngalo zonke izinto nezidalwa eziphilayo, lalifana. Yonke imininingwane yegunya namandla kaNkulunkulu ibonakala ezethembisweni nasezibusisweni Zakhe ezihlukene ku-Abrahama noJobe, futhi iphinde ikhombise isintu ukuthi igunya likaNkulunkulu liqhelelene kakhulu nokubuka ngamehlo engqondo komuntu. Le mininingwane iphinda itshele isintu ukuthi uma sifisa ukwazi igunya likaNkulunkulu, lokhu kungatholakala kuphela ngamazwi kaNkulunkulu nangokuzwa umsebenzi kaNkulunkulu.
Igunya likaNkulunkulu lobukhosi phezu kwezinto zonke livumela umuntu ukubona iqiniso: igunya likaNkulunkulu alibonakali nje kula mazwi “Futhi uNkulunkulu wathi, Makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya, futhi, Makube khona umkhathi, kwaba khona umkhathi kanye nokuthi Makube khona umhlaba, kwase kuba khona umhlaba,” kodwa ngaphezu kwalokho, indlela enza ngayo ukuthi ukukhanya kuqhubeke, yavimba ukuthi isibhakabhaka sishabalale, futhi kwagcina nomhlaba uhlukene unomphelo namanzi, kanye nemininingwane yokuthi wabusa phezu kwezilwane waziphatha: ukukhanya, isibhakabhaka, kanye nomhlaba. Nibonani futhi esibusisweni sikaNkulunkulu esintwini? Ngokusobala, emuva kokuthi uNkulunkulu esebusise u-Abrahama noJobe, izinyathelo zikaNkulunkulu azizange zikhawuke, ngoba wayesanda kuqala nje ukusebenzisa igunya Lakhe, futhi wayehlose ukwenza wonke amazwi Akhe ukuthi afezeke, futhi ukuze yonke imininingwane ayeyishilo ifezeke, nangeminyaka elandelayo, waqhubeka wenza yonke into ayeyihlosile. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu unegunya, mhlawumbe kumuntu kubukeka sengathi uNkulunkulu uyakhuluma kuphela, futhi akadingi nokuthi enze lutho ukuze zonke izindaba nezinto zifezeke. Ukucabanga kanjalo ngandlela thize akunangqondo! Uma uthatha umbono wokubuka ecaleni elilodwa ukumisa kukaNkulunkulu isivumelwano nomuntu esebenzisa amazwi, kanye nokufeza zonke izinto esebenzisa amazwi, futhi ungakwazi ukubona izimpawu namaqinso anhlobonhlobo okuthi igunya likaNkulunkulu liyabusa phezu kokuba khona kwezinto zonke, ngakho ukuqonda kwakho ngegunya likaNkulunkulu akunalutho kakhulu futhi akunawo umqondo! Uma umuntu ecabanga ukuthi uNkulunkulu unjalo, ngakho, kufanele kushiwo ukuthi, ulwazi lomuntu ngoNkulunkulu seluze lwaphoseka emseleni, futhi kwaze kwafika ekugcineni, ngoba uNkulunkulu lo muntu amcabangayo, ucishe abe ngumshini nje okhipha imiyalezo, hhayi uNkulunkulu onegunya. Uboneni ngezibonelo zika-Abrahama noJobe? Ulubonile uhlangothi okuyilona lona lwegunya namandla kaNkulunkulu? Emuva kokuthi uNkulunkulu wayesebusise u-Abrahama noJobe, uNkulunkulu akazange ahlale lapho ayekhona; futhi akazange athumele izithunywa Zakhe ukuthi zisebenze lapho yena elindile ukubona ukuthi umphumela kwakuzoba yini. Kunalokho, kwathi angaqeda ukukhuluma amazwi akhe, uNkulunkulu, igunya likaNkulunkulu laqala lasebenza emhlabeni wonke, futhi lahlela umzila ukuze kufezeke futhi kugcwaliseke izithembiso ayezenze ku-Abrahama noJobe, ngaleso sikhathi futhi wenza izinhlelo ezifanele namalungiselelo akho konke okwakudingeka esinyathelweni ngasinye kanye nasezigabeni ezisemqoka ayehlose ukuzenza. Ngalesi sikhathi, uNkulunkulu wahlela izithunywa Zakhe, kodwa futhi nazo zonke izinto ayezidalile. Okungukuthi, indlela igunya likaNkulunkulu elalisebenza ngayo, lalifake izithunywa, kodwa ngaphezu kwalokho lalifake zonke izinto, ezazibekwe ezikhundleni ezehlukene ukuze zisebenze ukufeza umsebenzi ayewuhlelile; lezi yizindlela ezithize, igunya likaNkulunkulu elasebenza ngazo. Emicabangweni yenu, abanye mhlawumbe banalokhu kuqonda ngegunya likaNkulunkulu: uNkulunkulu unegunya, futhi uNkulunkulu unamandla, ngakho uNkulunkulu udinga ukuthi ahlale ezulwini lesithathu, futhi ahlale endaweni eyodwa, futhi akadingi ukwenza umsebenzi othile, futhi wonke umsebenzi wakhe uwenza ngokuphelele ngemicabango Yakhe. Abanye kungenzeka bakholwe ukuthi, noma uNkulunkulu wabusisa u-Abrahama, akadinganga ukuthi enze lutho, futhi kwakwanele nje ukuthi amane akhulume amazwi Akhe. Ilokhu ngempela okwenzeka? Ngokusobala, cha! Noma uNkulunkulu enegunya namandla, igunya namandla Akhe kuliqiniso futhi okwangempela, akuyona into engenalutho. Ubuqiniso nengqikithi yegunya namandla kaNkulunkulu kwembulwa kancane kancane futhi kubonakala ekudaleni Kwakhe zonke izinto nokulawula phezu kwezinto zonke, kanye nangenqubo ahola futhi aphatha ngayo isintu. Zonke izindlela, yonke imibono, kanye nayo yonke imininingwane yobukhosi bukaNkulunkulu phezu kwesintu nezinto zonke, nawo wonke umsebenzi asewufezile, kanye nokuqonda Kwakhe zonke izinto—ngokusobala zonke zifakazela ukuthi igunya namandla kaNkulunkulu akuwona amazwi angasho lutho. Igunya namandla akhe kukhonjiswa futhi kwembulwe njalo njalo futhi ezintweni zonke. Lokhu kubonakaliswa nezambulo kukhuluma ngobukhona boqobo begunya likaNkulunkulu, ngoba usebenzisa igunya namandla Akhe ukuqhubeka nomsebenzi Wakhe, kanye nokulawula zonke izinto, nokubusa phezu kwezinto zonke umzuzu ngomzuzu, futhi amandla negunya Lakhe ngeke kuthathelwe indawo izingelosi, noma izithunywa zikaNkulunkulu. UNkulunkulu wanquma ukuthi yiziphi izibusiso ayezozinika u-Abrahama noJobe—kwakuncike kuNkulunkulu. Noma izithunywa zikaNkulunkulu zamvakashela mathupha u-Abrahama noJobe, izenzo zazo zazihambisa ngokwemiyalo kaNkulunkulu, futhi ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu, futhi zazingaphansi kobukhosi bukaNkulunkulu. Noma umuntu ebona izithunywa zivakashela u-Abrahama, futhi engamboni uNkulunkulu enza okuthile ngokwakhe, emibhalweni yeBhayibheli, empeleni, okunguyena osebenzisa amandla negunya nguNkulunkulu uqobo Lwakhe, futhi lokhu akuvumeli ukungabaza kwanoma umuphi umuntu! Noma ubonile ukuthi izingelosi nezithunywa zinamandla amakhulu, futhi zenza izimangaliso, noma zenze izinto ezithile zithunywe nguNkulunkulu, izenzo zazo kuphela zingenxa yokwenza lokho uNkulunkulu azithume khona, futhi azenzi lutho ngenhloso yokubonakalisa igunya likaNkulunkulu—ngoba akukho muntu noma into enegunya loMdali lokudala zonke izinto nokuphatha zonke izinto. Ngakho akukho muntu noma into engasebenzisa noma ikhombise igunya loMdali.
Amazwi lawa angezansi abaluleke kakhulu ekwazini igunya likaNkulunkulu, kanti nencazelo yawo, inikwe kule hlanganyelo elandelayo.Masiqhubeke sifunde umBhalo.
(Jobe 2:6) Futhi INKOSI yayisithi kuSathane, Bheka, usesandleni sakho; kodwa ungakuthinti ukuphila kwakhe.
USathane selokhu onakalisa isintu izinkulungwane zeminyaka. Usedale ububi obungebalwe, ukhohlise isizukulwane ngesizukulwane, futhi wenza amacala esabekayo emhlabeni. Uhlukumeze umuntu, wakhohlisa umuntu, wayenga umuntu ukuthi amelane noNkulunkulu, futhi wenza izenzo ezimbi ezikhungathe zakhinyabeza uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha izikhathi eziningi. Kepha, ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu, zonke izinto nezidalwa eziphilayo ziyaqhubeka ukugcina imigomo nemithetho ebekwe nguNkulunkulu. Uma uqhathanisa negunya likaNkulunkulu, imvelo embi kaSathane nedlangile imbi kakhulu, iyanyanyeka kakhulu, futhi iyanyanyisa, futhi incane kakhulu futhi ibuthakathaka. Noma ngabe uSathane uhamba phakathi kwezinto zonke ezidalwe nguNkulunkulu, akakwazi ukudala ngisho oluncane uguquko kubantu, ezintweni, kanye noma yini edalwe nguNkulunkulu. Izinkulungwane eziningi zeminyaka seyidlulile, futhi isintu sisathakasela ukukhanya nomoya okulethwe nguNkulunkulu, sisaphefumula umphefumulo okhishwe nguNkulunkulu uqobo, sisajabulela izimbali, izinyoni, izinhlanzi kanye nezinambuzane ezidalwe nguNkulunkulu; imini nobusuku busadedelana; izinkathi ezine zonyaka zisadedelana njengokujwayelekile; amahansi andiza esibhakabhakeni ayahamba ebusika, futhi abuye entwasahlobo elandelayo; izinhlanzi emanzini aziyishiyi neze imifula namachibi—ikhaya lazo; izihlonono emhlabathini ziyacula ngokuzimisela ehlobo; izinyendle otshanini ziyavungazela kancane zihambisana nomoya ekwindla; amahansi ayaqoqana aba imihlambi, lapho ukhozi lusahlala lodwana; imihlambi yamabhubesi ayazigcina ephila ngokuzingela; inyamazane i-elk ayeduki ibe kude notshani nezimbali…. Zonke izinhlobo zezilwane eziphilayo phakathi kwezinto zonke ziyahamba futhi zibuye, futhi ziphinde zihambe futhi, izigidi zezinguquko zenzeka ngokuphazima kweso—kodwa okungaguquki imizwelo nemithetho yokuphila. Noma isintu, esiphila phakathi kwezinto zonke, sonakalisiwe futhi sakhohliswa nguSathane, umuntu akakwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi enziwe nguNkulunkulu, kanye nomoya owenziwe nguNkulunkulu, kanye nezinto zonke ezenziwe nguNkulunkulu, futhi umuntu usaphila futhi azale kakhulu ande kule ndawo edalwe nguNkulunkulu. Isazelo sesintu asikaguquki. Umuntu usathembe amehlo ukubona, izindlebe ukuba ezwe, uthembele engqondweni yakhe ukucabanga, enhliziyweni yakhe ukuqonda, emilenzeni nezinyawo ukuhamba, ezandleni ukusebenza, njalonjalo; yonke imizwa uNkulunkulu ayinika umuntu ukuze akwazi ukwemukela ukuhlinzeka kukaNkulunkulu yilokhu ingaguqukile. Amandla asiza umuntu ukuba asebenzisane noNkulunkulu akakaze aguquke, amandla esintu okwenza umsebenzi wesidalwa esidaliwe awakaguquki, izidingo zesintu zikamoya azikaguquki, ukulangazelela kwesintu ukuba sisindiswe nguMdali akukaguquki. Zinjalo izimo zamanje zesintu, esiphila ngaphansi kwegunya kaNkulunkulu, futhi esibekezelele imbubhiso yegazi edalwe nguSathane. Noma isintu besingaphansi kwencindezelo kaSathane, futhi singasebona o-Adamu no-Eva basekuqaleni kwendalo, kodwa sesigcwele izinto eziphikisana noNkulunkulu, njengolwazi, ukubona ngamehlo engqondo, imicabango, njalo njalo, futhi sigcwele isimo sokukhohlakala sikaSathane, emehlweni kaNkulunkulu, isintu kuseyisintu esifanayo nalesi asidala. Isintu sisabuswa futhi siphethwe nguNkulunkulu, futhi sisaphila emzileni obekwe nguNkulunkulu, ngakho emehlweni kaNkulunkulu, isintu esonakaliswe nguSathane, sisembozwe yinsila, sinesisu esidumayo, nokuphendula okuthanda ukuhamba kancane, ukukhumbula okungasekuhle njengakuqala, nokuthi sesithe ukukhula ngeminyaka—kodwa konke ukusebenza nemizwa yomuntu akulimalanga nhlobo. Lesi isintu uNkulunkulu ahlose ukusisindisa. Lesi sintu kufanele sizwe nje ukumemeza koMdali futhi sizwe iphimbo loMdali, bese sisukuma futhi siphuthume ukuthola umthombo walelo phimbo. Lesi sintu kufanele sibone nje isiqu soMdali, bese sishaya konke indiva, futhi sishiye konke, ukuze sizinikele kuNkulunkulu, futhi size sinikele ngempilo yaso Kuye. Uma inhliziyo yesintu iqonda amazwi athinta inhliziyo aphuma enhliziyweni yoMdali, isintu sizolahla uSathane futhi size ngakuMdali; lapho isintu sesikugezile ngokuphelele ukungcola emzimbeni waso, futhi saphinde sathola ukuhlinzekwa nokondleka kuMdali, ukukhumbula kwesintu kuyobuyela, futhi ngalesi sikhathi isintu siyobe sesibuyele ngempela ekubuseni koMdali.
Umfumfu 21, 2014
UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IX UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele V UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IV